Ambin-tsakafo Tsy Nohanina Mandritra ny Lanonana Ao Arzantina Alaina Hozaraina Indray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2016 3:24 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Français, Ελληνικά, Español
Mpilatsaka an-tsitrapo miaraka amin'ny Proyecto Plato Lleno. Nahazoana alalana.
Fisantarana andraikitry ny mpilatsaka an-tsitrapo ao Arzantina ny Proyecto Plato Lleno (Tetikasa Lovia Feno) izay maka ireo ambin-tsakafo tsy nohanina any amin'ny hetsika, lanonana, sy fety samihafa izay matetika miafara any anaty fanariam-pako ireo sakafo. Efa nahangona sakafo milanja 24 000 kilao sahady ny vondrona, izay nahavita nameno lovia 48.000 sy kibo noana mitovy isa amin'izany.
Karajia teo amin'ny mpinamana roa no niandohan'ny tetikasa. Nahita i Alexis Vidal, mpandravaka lanonana sy Paula Martino, izay miasa amina orinasa mpikarakara hetsika maharitra fa marobe loatra ireo sakafo tsy nohanina ariana rehefa tapitra ny lanonana, ka nanapa-kevitra hanao zavatra mifandraika izany izy ireo. Ny Tetikasa Lovia Feno no naterak'izany, tetikasa noforonina tamin'ny 2013..
Hoy ny pejy Facebook-n'ny tetikasa:
Vokatry ny firaisankina ny tetikasa […] mba hikarakarana hetsika amin'ny fomba maharitra, manoloana ny fanontaniana hoe: ‘Inona no azontsika atao amin'ny sakafo tsy misy mihinana mandritra ny lanonana (izay tena marobe) izay matetika miafara any anaty fanariam-pako? “
Teraka tsikelikely ity tetikasan'ny mpirotsaka an-tsitrapo 100 isan-jato ity, ka azo nalefa any amin'ireo fikambanana, fisakafoanana sy ny sisa ireo sakafo nokarakaraina izay tsy nohanina tany amin'ireo lanonana samihafa. Ny fahombiazana amin'izany dia ny … NY FAHAVONONANA HANAO IZANY!
Nofonosina alohan'ny hizarana azy. Nahazoana alalana.
Araka ny nolazain'izy ireo tamin'ny gazety Arzantina La Nación, “tonga mandritra ny fety ireo mpilatsaka an-tsitrapo, ka fonosiny ireo sakafo nohandroana nefa tsy nohanina, ary mitondra izany mivantana any amin'ireo fikambanana ara-tsosialy mba hozaraina faran'izay haingana na hampangatsiahina raha tara tara vao hozaraina.”
Ankoatra an'i Buenos Aires, dia mavitrika ao Mendoza, La Plata sy Posadas ihany koa ny tetikasa. Nanomboka niasa tamin'ny volana Oktobra ny vondrona Mendoza, raha nahare momba ny tetikasa natomboka tao an-drenivohitr'i Arzantina ny olona efatra, ary nanapa-kevitra ny hitondra izany ao amin'ny faritanin'izy ireo. Tamin'ny asa an-tsitrapo voalohany indrindra nataon'izy ireo tamin'ny alina, naavotra sakafo 30 kilao (66 kilao) izy ireo izay nanampy namahanana olona 60 tao anatin'ny ora vitsy monja.
Solontenan'ny tetikasa nilaza tamin'ny tranokalam-baovao Elsol hoe:
Mipoitra any amin'ny lanonana iray ny vondrona […] ary manatontosa hetsika izay ny fikarakarana sakafo no anton-draharaha voalohany. Mitafy akanjo sahaza amin'ny lanonana (satroka, saron-tava, sy ny sisa) ireo mpilatsaka an-tsitrapo, fonosina ny lovia banga ary ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana. Avy eo alefa any amin'ny lakozia efa nifampiresahana mialoha tamin'ny tetikasa ireo sakafo.
Hentitra ny dingana famonosana izay sakafo rehetra voaangona, araka ny hitanao ao amin'ny bokikelin'ny tetikasa “ny Fitsipiky ny Famonosana”:
[1. Hanaovana ny satroka, ny sarom-bava. ary ny fanamiana. 2. Mamantatra, mamafa .ary manadio ny toeram-piasana. 3. Apetraho eo amin'ny toeram-piasanao ny fitaovana rehetra. 4. Sasao ny tanana. 5. Ampidiro ny fonon-tanana. 6. Atomboy am-pitandremana ny dingana famonosana voalohany ireo sakafo. 7. Ataovy ny famonosana farany. 8. Fatory ny baoritra ary hoento any anaty fiara. 9. Esory ny fonon-tanana sy ny sarom-bava. 10. Sasao ny tanana.] Nahazoana alalana.
Mampiseho ny fomba fikarakaran'ny tetikasa ireo sakafo voaavotra ity lahatsary eto ambany ity. Jereo fa tontosaina amin'ny alina avokoa ny ankamaroan'ny hetsika, ka afaka mahazo ny sakafo ny ampitso maraina ireo olona izaràna izany:
Mampiasa Twitter ihany koa ny tetikasa amin'ny asa sy ny hetsika ataony:
Afaka miaraka aminay toy ny mpanavotra sakafo miaraka amin'ny karatry ny bankinao ianao ankehitriny!!!
Afaka manavotra isam-bolana ianao: 1 kilao/$24; 2 kilao/$48; 5 kilao/$120.
Tsotra fotsiny: alefaso mailaka aminay ao amin'ny proyectoplatolleno@gmail.com ny mombamomba anao amin'ny bankinao sy ny lanja amin'ny kilao tianao havotana.
Miala ho azy amin'ny kaontinao ny vola avy eo.
Afaka manampy anay ve ianao ka afaka manohy ny asany hatrany ny Lovia Feno?
Manana toeram-pisakafoanana ve ianao ary tsy fantatrao izay atao amin'ireo sakafo tsy nohanina. Te hilaza aminao izahay fa afaka miara-miasa isika.
Hetsika fanohanana tontosain'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ny Tetikasa Lovia Feno, ka ny hisorohana ny fanariana ireo sakafo tsy nohanina mandritra ny lanonana no tanjona amin'izany.
Ny tanjonay dia miezaka mizara ireo ambin-tsakafo tsy nohanina izay mety hiafara any anaty fanariam-pako!
Aza ariana ny sakafo.
Ao Mendoza, manangona sakafo hanampiana fampisakafoanana ny hafa ny olona.
Tamin'ny 2015, latsaky ny 5 isan-jaton'ny mponina ny tahan'ny tsy fahampian-tsakafo, araka ny tatitra farany momba ny Toetry ny Olana Ara-tsakafo Manerantany navoakan'ny Sampana Ara-tsakafo sy Fambolena ao amin'ny Firenena Mikambana. Na izany aza, manamarika ny Mpanaramaso Ara-tsosialin'ny Oniversite Katolika ao Arzantina fa ankizy Arzantinina roa amin'ny ankizy Arzantinina folo no mbola tsy ampy sakafo tamin'ny 2015, ary miaritra “tsy fanjarian-tsakafo goavana” ny antsasak'ireo ankizy ireo - zava-misy mpitranga indrindra amin'ny tokantrano kely fidiram-bola any amin'ny tanàna kely, araka ny filazan'ny gazety Panam Post .